Dawladda Itoobiya Waxay Ku Khasban Tahay Inay Ilaashato Danaheeda Strategic-Ga Ah Ee Ay La Leedahay Somaliland-W/Q Cabdiraxmaan Cadami | Himilo Media Group
Sida lagu baahiyey warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa lagu sheegay inay heshiis wada galeen dawladda Itoobiya 30-08-2018, heshiiskan oo ka koobna dhawr qodob waxaana ka mid ah:-
In labada dal iska kaashadaan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha;
Xushmaynta madax bannaanida iyo midnimada labadooda dal;
Xoojinta ama hirgelinta heshiisyadii ama is afgaradkii hore ee Muqdisho lagu gaadhay;
In la dhiso guddi laba geesood ah oo ka shaqeeya wanaajinta xidhiidhka labada dal.
Ma xuma oo dawladuhu mar kasta oo loo baahdo waxay wada galaan heshiisyo ka turjumaya danaha labadaa dal ama ay faa’iido ugu jirto labadaba, waxase laga yaaba in dhinacba qodobo gaar ah si gaar ah u danaynayo.
Haddaba, heshiiska la sheegay in dawladda Itoobiya dhankeeda waxay ku gorgortamaysaa arrimo ay ka doonayso inay Soomaaliya u fuliso laakiin, weftiga Soomaalidu wuxuu mabsuud ku yahay oo kaliya qodobka 2-aad ee heshiiska oo ah Itoobiya in ay xushmayso midnimada Soomaaliya.
Waxaynu ognahay Itoobiya hore ba inay u aqoonsanayd midnimada Soomaaliya laakiin, ujeedada dhabta ah waxay tahay oo ay si dad ban dawladda Itoobiya uga dalbanayaan in ay joojiso xidhiidhka iyo iskaashiga ay la leedahay JSL. Waxay rabaan in wax kasta oo dawladda Itoobiya uga baahato Somaliland loo soo maro Farmaajo iyo xukumaddiisa.
Ma aha markii ugu horreysay ee ay heshiis noocan oo kale ah la galaan dawlado ajanabi ah iyaga oo ka ogolaanaya arrimo halis ku ah Qarannimada iyo sharafta ummadda iyagoo ku iibsanaya kaliya in gacan lagu siiyo la dagaallanka iyo goddoominta ama cunaqabataynta Jamhuuriyadda Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee dawladda Itoobiya waxay ku qasban tahay inay ilaashato danaheeda Istaraatijiga ah ee ay la leedahay Somaliland, tusaale ahaan Somaliland oo kaashanaysa sirdoonka waddamada jaarka ah iyo kuwa beesha caalamka waxay door muhiim ah ka qaadatay la dagaallanka Argagixisada.
Badda cas aagga kaga beegan Somaliland waxay ka xidhay budhcad badeeda ka qawlaysatada biyaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka fog ba.
Itoobiya waxay saami ku leedahay dekedda Berbera (Shuraako).
Itoobiya iyo Somaliland waxay si wada jir ah u maalgalinayaan Jidka Rajada ee isku xidhaya labada dal (Somaliland-Ethiopia Economic corridor).
Isla marka ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi iyo shicibku ba waxay waddaagaan aragtida ah in gobolka Geeska Afrika ee colaaduhu daashadeen nabad lagu soo dabaalo si horumarka gobolka looga wada shaqeeyo.
Waxa laga yaabaa in dad aan xogogaal ahayni u qaataan heshiisyo macno leh oo saamayn ku yeelan kara xidhiidhka dhaw ee Somaliland iyo Itoobiya. Itoobiya marnaba Somaliland ku doorsan mayso iskumana hallayn karto maamulka Soomaaliya ee tamarta darran ama magac u yaalka ah oo xattaa tahli kari weyday inay si buuxda uga wada taliso gobolka Banaadir.
Waxa kale oo baryahan dambe ku soo kordhay in Xamar ay gabbood u noqoto kooxo ‘Mafia’ ah iyo xarun lagu meydhaamo ama lagu meydho lacagaha xaaraanta ah (money laundering) sidaas daraadeed waa maan gaabnimo in Farmaajo ku fekero in dawladda Itoobiya isaga uga fasax qaadato Somaliland oo muddo 28 sannadood ah beesha caalamku ula macaamilaysay sidii dal xor ah oo madax bannaan.